Bhutan: Ala nke Dragọn ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Bhutan » Bhutan: Ala nke Dragọn ahụ
Akụkọ kacha ọhụrụ na Bhutan • Na-agbasa News Travel • omenala • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
by Rita Payne - pụrụ iche na eTN
Paro ọdụ ụgbọ elu - Foto © Rita Payne
dere Rita Payne - pụrụ iche na eTN
Nnukwu Obi Nationaltọ Mba
Eze nke alaeze Himalaya nke Bhutan mere ka akụkọ mba ụwa pụta ụwa mgbe ọ kwupụtara na oke obi ụtọ mba bụ ebumnuche nke gọọmentị na ekwesighi ka eleba anya na akụ na ụba dị ka naanị ihe ịga nke ọma. Eze ugbu a, dị ka ndị nna nna ya, gbalịsiri ike ịnọgide na-enwe nguzozi n'etiti ọganihu na mmepe ma na-echekwa ọdịbendị na ihe nketa pụrụ iche nke alaeze ahụ.
Ihe amara nke Bhutan, nke aha mbụ ya, Druk Yul, pụtara Ala Dragọn nke Thunder, pụtara ìhè mgbe ọ na-efeba n'alaeze ahụ. Aircraftgbọ elu ahụ na-agbadata n'ígwé ojii n'elu mbara ugwu dị egwu ịpụ na ọdụ ụgbọ elu Paro. N'adịghị ka ọtụtụ mba na ọkọlọtọ mba dị iche iche ihe owuwu ahụ na imewe ya dabere na ụdị Bhutanese nwere oke osisi na ogidi na Buddhist-themed murals na mgbidi. Tashi Namgay Resort, nke bu isi ulo anyi n’oge anyi no, di n’ebe di nma n’odu ugbo elu. Dị ka ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ dị na Bhutan, ụlọ nkwari akụ ahụ na-esitekwa na ụkpụrụ ụlọ ọdịnala dị na mpaghara na-enweta ume site na ịnye ihe eji enyere ndụ aka na ụlọ obibi okomoko.
Akwụ Tiger na ihe nkiri ndị ọzọ
A na-ahụta Paro dịka otu n’ime ndagwurugwu Bhutan mara mma. Anyị tetara n’ụbọchị nke mbụ nke nleta anyị na ụda mmiri na-asọ ọsọ nke na-agbada n’okpuru ngwongwo ụlọ nkwari akụ ahụ site na isi iyi ya n’ugwu Himalayan. Onye ndu anyị, Namgay, na onye ọkwọ ụgbọala na-eto eto, Benjoy, zutere anyị, onye ghọrọ ndị anyị tụkwasịrị obi ma gwa anyị na njem anyị niile.
Ihe mbụ n’usoro ihe omume anyị bụ nke kacha sie ike. Ebumnuche anyị bụ ịrịgo ebe obibi ndị mọnk nke Paro Taktsang, nke a maara nke ọma dị ka Tiger Nest, nke na-arapara n'akụkụ ọnụ ugwu. N'ụzọ dị mwute, aghaghị m ịda mbà mgbe anyị na-erughị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụzọ ahụ, na-ekwenye na m erughị eru iji mezuo njem ahụ. Di m, onye ejiri ihe egwu sie ike, nwere obi uto nke ịrịgo ebe obibi ndi mọnk ma nwee obi uto banyere echiche di egwu. Ebe obibi ndị mọnk ahụ kwenyere na ọ dị na saịtị ebe Guru Rinpoche tụgharịrị uche na ọgba na 8 narị afọ. A na-asọpụrụ ya dịka otu n'ime saịtị Buddha dị nsọ ọ bụghị naanị na Bhutan kamakwa na mpaghara Himalaya niile.
Drivegbọ njem nkeji iri site na etiti Paro bụ Kyichu Lhakhang ụlọ nsọ mara mma nke narị afọ nke asaa. Nakwa na Paro district bụ Ta Dzong (National Museum) otu n'ime ebe kachasị mma iji mụta banyere okpukpe Bhutan, omenala na nka ọdịnala na nka. Site na ebe a ụzọ na-eduga na Rinpung Dzong nnukwu ụlọ obibi ndị mọnk na ebe ewusiri ike nke nwere mpaghara Monastic Isi yana ụlọ ọrụ gọọmentị Paro. Site na Paro, anyị gawara isi obodo, Thimphu, ebe anyị nyochara na Peri Phuntso Hotel a ma ama na njem ndị njem.
N’isi ụtụtụ echi ya, anyị siri na Thimphu gawa Punakha gafere Dochula ngafe (3,100m) nke na-anwale ọkwọ ụgbọ ala anyị, Benjoy, ebe ọ bụ na mmiri ozuzo na nnukwu alụlụ kpuchiri akụkụ ụzọ ahụ. Mgbe igwe gbachapụrụ, anyị ji ụgwọ ịtụ egwu nke ugwu ọwụwa anyanwụ Himalaya were kwụrụ ụgwọ kachasị elu nke Bhutan.
Otu nnukwu akara bụ Punakha Dzong ebe ewusiri ike nke mere na Shabdrung Ngawang Namgyel wuru na 1637 ma di na uzo nke Pho Chu na Mo Chu Rivers. Punakha bụ isi obodo Bhutan ruo 1955 ma ka na-eje ozi dị ka ebe obibi oyi nke Je Khenpo, Abbot Chief. Ebe ewusiri ike, nke rụworo ọrụ pụtara ìhè na okpukpe na ndụ obodo nke mba ahụ, ọkụ, idei mmiri na ala ọma jijiji bibiri na ọkwa dị iche iche nke akụkọ ntolite ya ma weghachi ya kpamkpam n'okpuru nduzi nke Eze ugbu a.
Akụkọ ifo na akụkọ mgbe ochie juru na Bhutan. Ala eze ahụ nwere ụlọ arụsị na ihu arụsị ndị a raara nye chi dị iche iche nke ndị chi, ndị mọnk na ndị okpukpe nwere ikike pụrụ iche iji gwọọ ma nyefee ngọzi pụrụ iche. Anyị gara njem dị mkpirikpi gaa n'ụlọ nsọ nke Drukpa Kunley, onye mọnk nwere aha na-adọrọ mmasị. A bịara mara ya dị ka "Onye Isi nke ara nke Bhutan" n'ihi ndụ ya mara mma ma were ya na ọ nwere 'anwansi anwansi'; ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ejikọtara ụlọ nsọ ahụ na ọmụmụ. Di na nwunye na-amụtaghị nwa na-eme njem ogologo oge iji kpegara ya ekpere na foto na-egosi na ụlọ nsọ nke ndị kwenyere na a zara ekpere ha.
Thimphu nlegharị anya laghachi na Paro
Mmemme ahụ na nloghachi anyị na Thimphu gụnyere nleta na Institute of Traditional Medicines ebe mmadụ nwere ike ịmụ maka ụmụ amaala amaala eji akwadebe ọtụtụ ngwaahịa ahụike. Anyị gara na Museum na Heritage Museum, nke na-egosiputa ngwa ọrụ nke ndị ọrụ ugbo Bhutanese na-eji eme ihe ma na-enye echiche banyere ndụ siri ike ha ka na-eduga n'akụkụ ndị mepere emepe nke alaeze ahụ. Nke dị nso bụ Schoollọ Akwụkwọ Na-ese Ihe nke na-ahụ maka eserese ọdịnala, ihe osise na ihe osise osisi
N’uhuruchi, anyị gara Great Buddha Dordenma, nnukwu ihe oyiyi Buddha nke nọ n’elu ugwu nke na-ele Thimphu anya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 52 dị elu (ụkwụ 168) ọ bụ otu n'ime akpụrụ akpụ Buddha kachasị ukwuu na kachasị elu n'ụwa. Echiche nke Thimphu n'okpuru bụ ihe ịtụnanya. Ebe ndi ozo choro bu ulo oru ebe ana emeputa akwukwo na National Handicraft Emporium, nke aha ya na-egosi, bu uzo di egwu nke ngwaahịa emere na Bhutan
Omenala na ụzọ ndụ
Agbanyeghi na Bhutan gbara agbata n’etiti ndi agbata obi ya buru ibu, India na China, o nweela ihe ịga nke ọma n’ichebe asụsụ ya, omenaala ya na omenaala ya. Ọha obodo ya siri ike nha anya. Ọ bụ ezie na usoro ezinụlọ bụ nke nna, nkewa ezinụlọ na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Asụsụ gọọmentị nke alaeze ahụ bụ Dzongkha, olumba nke yiri Tibetan. Kalenda Bhutanese na-adabere na usoro Tibetan nke na-erite site na usoro ọnwa ndị China.
Ndị nwoke na ndị nwanyị na-eyi uwe ala ha n'agbanyeghị na mmadụ na-ahụ ndị mmadụ na uwe ọdịda anyanwụ n'obodo na obodo. Lookmụ nwoke na-ahụ ihe dị ka uwe ha nke na-eke n’úkwù. Womenmụ nwanyị ahụ yi uwe mwụda nkwonkwo ụkwụ nke e ji akwa dị iche iche mee wee yi ọla dị iche iche sitere na coral, peal, turquoise na nkume ajuju nke agate nke Bhutanese kpọrọ “anya mmiri nke Chi”
Nri Bhutanese dị mfe ma dị mma n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị adabara mmasị mmadụ niile. Gwọ ọdịnala bụ agwa bekee na ofe chiiz, anụ ezi ma ọ bụ anụ ehi nwere ọtụtụ akwụkwọ nri dị iche iche na ahịhịa mpaghara. Otu nwere ike ịnwe nri mpaghara na ọnụ ahịa dị ntakịrị na ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ traditionalụ traditionalụ ọdịnala yana ọbụna rie nri n'ụlọ ndị ahọrọ ahọrọ ndị debanyere aha na ụlọ ọrụ njem. Maka ndị njem nleta na-achọ ịrapara n'ụgbọ a maara nke ọma, ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ internationalụ mba ụwa na-enye nri ndị India, ọdịda anyanwụ na mba ndị ọzọ.
Njem nleta bụ isi iyi dị mkpa nke ego
Dị ka e kwuru na mbụ, Eze ahụ na-akpachara anya banyere ichebe ọdịnala na ihe nketa nke mba a site na mmebi nke njegharị azụmahịa na-akpata. Bhutan bụ mba akpọchiri ala nke naanị mmadụ 700,000, nwere oke nhọrọ maka mbupụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'ihi oke ugwu ya. Ọtụtụ n'ime ndị bi na mba ahụ dara ogbenye, 12% nọ n'okpuru usoro ịda ogbenye mba ụwa. Njem nleta bụ otu n'ime isi mmalite ego maka Bhutan. A choro ka ndị njem gaa opekata mpe $ 200 kwa mmadụ kwa ụbọchị site na Disemba - Febụwarị, na Juun - Ọgọstị na $ 250 kwa mmadụ kwa ụbọchị site na Machị - Mee, na Septemba - Nọvemba. A gụpụrụ ndị India, Bangladesh na Maldivians na ụgwọ a na-akwụ kwa ụbọchị. Enwekwara ụfọdụ ego dị, ọkachasị maka ụmụ akwụkwọ na ụmụaka ndị dị afọ 5 ruo 12. Iwu a emeela ka ụfọdụ ndị na-akatọ maka ịkpa oke maka ndị ọfụma. Otú ọ dị, ọ bụ n'ihi ego ndị njem na-enweta na ndị Bhutan nwere ike ịnụ ụtọ nlekọta ahụike n'efu, agụmakwụkwọ n'efu, enyemaka ịda ogbenye na akụrụngwa.
A gọziri Bhutan site n'ọtụtụ akụ na ụba dị egwu site na ugwu Himalaya na snow na glaciers ruo n'oké ọhịa. Ihe kariri uzo ato nke Bhutan kpuchitere oke ohia ebe umu nnunu, anumanu na ndu nnunu. Alaeze ahụ nwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba, otu n'ime ndị kasị eleta bụ Ebe Egwuregwu Mana nke dị n'akụkụ osimiri Manase nke mejupụtara ala na steeti Assam nke India. N'ebe a, mmadụ nwere ike ịchọta anụ ọhịa rhino nwere mpi, enyí, agụ, atụ, ọtụtụ ụdị mgbada na langur ọla edo, obere enwe nke pụrụ iche na mpaghara a. Ebe otutu umu anumanu na anwuchapu na ufodu uwa n'ihi ugwo ma obu ebe obibi site na mmepe obodo, Bhutan na etinye ego buru ibu ichebe ndu ohia ya.
Ọpụpụ si Bhutan
N'oge obere oge anyị nọrọ naanị, anyị nwere ike ịhụ akụkụ pere mpe nke ihe alaeze ga-enye. Oge ihu igwe, ghọrọ ihe dị mkpa ka anyị na-akwado ịhapụ Bhutan. Anyị nọrọ abalị na-echegbu onwe anyị na Paro ka igwe ojii na-ekpuchi ugwu na oke mmiri ozuzo na-aga n'abalị ahụ. O juru anyị anya na onye na-anabata ndị ọbịa na họtel ahụ gwara anyị na a na-akwụsịkarị ụgbọelu n'ihi ihu igwe na-adịghị mma. Na ihe omume chi anyi chia anyi ọchị, mmiri ozuzo kwusiri ma anyi nwere ike puo dika anyi siri kwuo. N'ihe na-erughị otu awa anyị laghachiri n'isi obodo Nepalese, Kathmandu, na ọbịbịa anyị na Bhutan dị ka nrọ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nyocha na Lonely Planet na-etinye Bhutan n'elu ndepụta nke mba ndị ị ga-eleta n'ụwa. Gọọmentị na-agbasi mbọ ike ijide ọdịbendị echekwara nke Bhutan n'agbanyeghị mmepe ngwa ngwa na mmezi ọgbara ọhụrụ. Mmadu nwere ike inwe olile anya na ihe ojoo nke ala eze anwansi a aghaghi ibibi site na mwakpo nke ndi njem nleta dika okwu gbasara gbasara amara ya.
Tashi Namgay Resort, Paro - Foto © Rita Payne
Lelee ebe obibi ndị mọnk nke akwụ Tiger - Photo © Rita Payne
Kyichu Lhakhang temple - Foto © Rita Payne
Punakha Dzong - Foto © Geoffrey Payne
Omenala nri Bhutanese - Photo © Rita Payne
Akwa Buddha Dordenma - Foto © Rita Payne
Odida obodo Bhutanese - Photo © Rita Payne
Rita Payne - pụrụ iche na eTN